Ukukhangisa | HacksDirect
Category Archives: Ukukhangisa
Okthoba 19, 2017 Ukukhangisa
Kuye kwaba izinyanga ezimbalwa, futhi lolu hlelo lokusebenza nomphakathi okuthiwa "Sarahah" uthethe nengxenye yesikhathi abantu esichithwa zokuxhumana. Lona sekuwumsebenzi entsha 'esematheni' wonk 'umuntu ukhuluma futhi usebenzisa ngesikhathi esifanayo. Ngakho yini ngempela Sarahah? Kuyinto isicelo ukuthi ikuvumela ukuthi uthumele imilayezo engaziwa kubasebenzisi bayo, futhi into enhle ngalokhu wukuthi ungenalo ukubhalisa ngokwakho kuyo ukuze bakwazi ukuthumela imiyalezo. Uma kungekho kwemizwelo ukuzithola, nje uyithumele ngaphandle kokuba ukubhalisa; lokhu ngokuqinisekile uthatha eziningi umthwalo ka emahlombe wonke umuntu.
Uhlelo lokusebenza ilula ngempela isebenze. Okufanele ukwenze nje uyilandele Android yakho noma iOS kanye uqalise. Uma ufuna futhi wamukele imilayezo ke leyo, kuzodingeka ukubhalisa ngokwakho ngohlelo lokusebenza ngokunikeza ulwazi efana igama lakho nekheli le-imeyili. Kukhona iwebhusayithi ukuthi ungakwazi ukufinyelela, nje uma ungenayo ifoni yakho, ukuze ubone ukuthi imiyalezo uthola. Uhlelo lokusebenza kubonakala sengathi nayo ithakazelisa futhi ikakhulukazi phakathi intsha ngoba kubonakala ingakwazi ukuthola off ke sifike maduze.
Lapho abantu banikwa ithuba ukusho okuthile umuntu ngaphandle kokuba ukumambula bazikhohlwe, abazi bavame ukuya phezu ibhodi. Njengoba okuningi njengoba lokhu uthola okujabulisayo, ke uthola kancane ukwazi omunye umuntu ukwazi enithuma zonke lezo imiyalezo. Ufuna ukuthola obelokhu Admire yakho eyimfihlo naso sonke lesi sikhathi noma ngenye indlela round. Ubungazizwa kanjani wena uma uma uthola ukwazi ukuthi kukhona ekugcineni yinto ingakusiza crack labo amagama? pretty ujabule, kwesokudla? Nokho-ke, ukubophela ngokwakho ngoba lokho esinazo uhlelo ngawe kwenzekani ngempela ukubulala ukuthi ilukuluku sakho.
I Sarahah zembula ithuluzi uhlobo Hack ku le app esikuvumela ukuthola amagama kanye nesazisi walabo ukukuthumela labo imilayezo engaziwa. It has a uhlelo nokubonwa okuyinto ikheli le-IP yomsebenzisi is zilandelwa, bese imininingwane efanele njenge gama kanye nekheli le-imeyili ethulwa indawo eyodwa. Ithuluzi akuyona nganoma iyiphi indlela engekho emthethweni, ngakho asikho isidingo sokuthi bakhathazeke mayelana uyisebenzisa. Kuyinto zikhona nje ukuze zenze ukuphila kwakho kancane kancane ukwazi.
Amathuba nale zembula ithuluzi akupheli. Manje ithuba ukwazi ukuthi abantu emsebenzini wakho ucabanga ngawe noma ngabe abantu ukubiza abangane bakho ngempela abangane bakho noma cha. Isibhakabhaka umkhawulo leli thuluzi; okungukuthi nje abantu ukuba bazi ngakho futhi bagcine ngcí ukusebenzisa uhlelo lokusebenza Sarahah kwasekuqaleni. Ngakho, kuze lokho kwenzeka, ukusebenzisa ithuba lakho ukuze aphendule yonke mibuzo ikhanda lakho zethu Sarahah zembula ithuluzi.
Izame futhi ujabulele!
Septhemba 2, 2017 Ukukhangisa
Njalo fan poker angathanda ukudlala poker amahora amaningi njengoba efuna. Kukhona izindawo lapho ukukunikeza ukudlala ithenisi nabangani bakho kanye nosebenza nabo. Nokho, kuzodingeka ukuba uphuma endlini yakho ukuze uthole lezo zindawo. Umdlalo poker Futhi uzodinga ukuthola isikhathi esikhululekile abe nihlangene nabangane bakho.
Roblox umdlalo eyadlalwa eziningi lapho avatar imisebenzi yakho ngokusebenzisa kungcono izwe futhi iqoqa igiya ezahlukene.
GTA 5 umdlalo egcwele isinyathelo lapho abadlali ukuqedela ohambweni lwabo. Ukuze indlela kulula maqondana kwaqedwa umsebenzi, abadlali kudingeka babe namathuluzi eziningi ezifana izibhamu, izimoto, emagalaji, njll.
8 ibhola ichibi lokujabulela uma kuziwa imidlalo. In the game, ungakwazi ukudlala ibhola pool ukufana.
Mahhala PSN amakhodi survey noma okulandwayo
Zonke abadlali kufanele ukhokhele konke okuqukethwe okungekona khulula ku-PSN esitolo noma nge-credit card kanye PlayStation inethiwekhi amakhadi.
Subway surfer okhiye angenamkhawulo futhi zemali
Subway surfer umdlalo nemfashini okuyinto kuye kwathonya isibalo esikhulu sabantu. Isidlali ngokuyisisekelo elawula umlingisi losemcoka umdlalo onqamula ithrekhi ukugwema izithiyo ezahlukene kanye iphoyisa. Nge izinkinobho kanye zemali kule mdlalo, ukwazi ukuthenga izinhlobo ezahlukene izinto uhlamvu yakho bese abalingiswa ezahlukene kakhulu.
shadow ukulwa 2 Hack zemali angenamkhawulo inthanethi
shadow Fight 2 is a fantastic game ne ihluzo amazing kanye sobuhle bayo isethwe ku Japan. Isidlali elwisana izitha ehlukahlukene usebenzisa induku yokudlala.
Mahhala akhawunti ye-PayPal ne imali angenamkhawulo
PayPal kabanzi ukuthengiselana lemali. ikakhulukazi, uma ukuthenga noma ukuthengisa into phesheya futhi inthanethi; PayPal kusho kuthengiselana ngawe.